Notch ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖုန်းသစ်ကို မေလ ၁၆ ရက်နေ့ မိတ်ဆက်တော့မယ့် Nokia | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Notch ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖုန်းသစ်ကို မေလ ၁၆ ရက်နေ့ မိတ်ဆက်တော့မယ့် Nokia
Notch ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖုန်းသစ်ကို မေလ ၁၆ ရက်နေ့ မိတ်ဆက်တော့မယ့် Nokia
HMD Global အနေနဲ့သိပ်မကြာခင်အချိန်မှာ စမတ်ဖုန်းသစ်တစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးသွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မှာ ပြသထားတဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာတော့ ဒီဖုန်းဟာ Nokia X လို့ ပြောထားပေမယ့် ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဒီဖုန်းရဲ့ နာမည်ကို ထုတ်မပြောထားသေးပါဘူး။ လာမယ့် မေလ ၁၆ ရက်နေ့ မှာ တရားဝင် ကြေငြာသွားမယ့် ဒီဖုန်းဟာ နာမည်ကြီး iPhone X ရဲ့ notch ဒီဇိုင်းမျိုးသုံးထားပြီး ဖုန်းအရွယ်အစားအနေနဲ့ လည်း iPhone X လိုမျိုး ၅.၈ လက်မ မျက်နှာပြင် သုံးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပေါက်ကြားလာတဲ့ ဖုန်းပုံတွေအရ Nokia X ဟာ မှန်ကိုယ်ထည်နဲ့ လာပြီး edge-to-edge display ပါရှိမယ်လို့ ခန့် မှန်းနေကြပြီး အားသွင်းစနစ်ကို USB Type-C port ကနေ အားသွင်းသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ထည်ကိုတော့ Nokia X ကိုလက်ရှိ mid-range ဖုန်းတွေထဲမှာ ခေတ်စားလာတဲ့ 19:9 screen အချိုးဖြစ်တဲ့ ခပ်ရှည်ရှည်ပုံစံနဲ့ပါ။ Nokia နာမည်နဲ့ ထွက်သမျှ ဖုန်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံး notch သုံးလာတဲ့ ဖုန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာအနေနဲ့ ကျောဘက်အလယ်မှာ ထောင်လိုက် dual camera စနစ်နဲ့ လာမှာ ဖြစ်ပြီး ကင်မရာမှန်ဘီလူးစနစ်တွေကိုတော့ Nokia ဖုန်းသစ်တွေအတွက် ကင်မရာအစိတ်အပိုင်းကဏ္ဍ တာဝန်ယူထားတဲ့ Carl ZEISS ကနေပဲ ထုတ်ပေးသွားမှာပါ။ dual camera တွေရဲ့ အောက်မှာတော့ fingerprint တစ်ခု ထည့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ကင်မရာကတော့ 12MP + 13MP Dual rear ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
ဖြန့်ချိရာနိုင်ငံရဲ့ ဈေးကွက်အရ ဖုန်းကိုမော်ဒယ်၂မျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်သွားနိုင်ပြီး တစ်ခုကို MediaTek Helio P60 chipset နဲ့ နောက်မော်ဒယ်မှာတော့ Snapdragon 636 chipset ကို သုံးသွားမှာပါ။ ပရိုဆက်ဆာပိုင်းသာမကဘဲ RAM နဲ့ သိုလှောင်မှုပိုင်း ကိုလည်း 4GB/64GB အတွဲနဲ့ 6GB/128GB အတွဲဆိုပြီး ဗားရှင်း နှစ်မျိုး ပါရှိမယ်လို့ သတင်းထွက်ထားပါတယ်။ ဒီဖုန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ feature တွေကိုတော့ လာမယ့် မေလ ၁၆ ရက်နေ့ မှာ ထပ်မံကြားသိရဦးမှာပါ။ လက်တလောထွက်ရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Nokia X Key Specifications (Expected)
5.8-inch full-HD+ display with 1080×2280 pixels resolution, and 19:9 aspect ratio.
4GB & 6GB RAM | 64GB & 128GB Internal Storage
Qualcomm Snapdragon 636 oraMediaTek Helio P60 SoC
Carl Zeiss branded 12MP + 13MP Dual rear camera sensors
Front camera information not available yet, but the lens comes with Carl Zeiss
Connectivity: 3.5 mm jack, 4G VoLTE, WiFi, GPS, GLONASS, USB Type C port and Bluetooth 4.2.
HMD Global အနနေဲ့သိပျမကွာခငျအခြိနျမှာ စမတျဖုနျးသဈတဈမြိုးကို မိတျဆကျပေးသှားတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။တရုတျမှာ ပွသထားတဲ့ ကွျောငွာတှမှောတော့ ဒီဖုနျးဟာ Nokia X လို့ ပွောထားပမေယျ့ ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ ဒီဖုနျးရဲ့ နာမညျကို ထုတျမပွောထားသေးပါဘူး။ လာမယျ့ မလေ ၁၆ ရကျနေ့ မှာ တရားဝငျ ကွငွောသှားမယျ့ ဒီဖုနျးဟာ နာမညျကွီး iPhone X ရဲ့ notch ဒီဇိုငျးမြိုးသုံးထားပွီး ဖုနျးအရှယျအစားအနနေဲ့ လညျး iPhone X လိုမြိုး ၅.၈ လကျမ မကျြနှာပွငျ သုံးသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ပေါကျကွားလာတဲ့ ဖုနျးပုံတှအေရ Nokia X ဟာ မှနျကိုယျထညျနဲ့ လာပွီး edge-to-edge display ပါရှိမယျလို့ ခနျ့ မှနျးနကွေပွီး အားသှငျးစနဈကို USB Type-C port ကနေ အားသှငျးသှားဖို့ ရှိပါတယျ။ ကိုယျထညျကိုတော့ Nokia X ကိုလကျရှိ mid-range ဖုနျးတှထေဲမှာ ခတျေစားလာတဲ့ 19:9 screen အခြိုးဖွဈတဲ့ ခပျရှညျရှညျပုံစံနဲ့ပါ။ Nokia နာမညျနဲ့ ထှကျသမြှ ဖုနျးတှထေဲမှာ ပထမဆုံး notch သုံးလာတဲ့ ဖုနျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကငျမရာအနနေဲ့ ကြောဘကျအလယျမှာ ထောငျလိုကျ dual camera စနဈနဲ့ လာမှာ ဖွဈပွီး ကငျမရာမှနျဘီလူးစနဈတှကေိုတော့ Nokia ဖုနျးသဈတှအေတှကျ ကငျမရာအစိတျအပိုငျးကဏ်ဍ တာဝနျယူထားတဲ့ Carl ZEISS ကနပေဲ ထုတျပေးသှားမှာပါ။ dual camera တှရေဲ့ အောကျမှာတော့ fingerprint တဈခု ထညျ့ပေးသှားမှာ ဖွဈပွီး ကငျမရာကတော့ 12MP + 13MP Dual rear ဖွဈနိုငျခွရှေိပါတယျ။
ဖွနျ့ခြိရာနိုငျငံရဲ့ စြေးကှကျအရ ဖုနျးကိုမျောဒယျ၂မြိုးနဲ့ ထုတျလုပျသှားနိုငျပွီး တဈခုကို MediaTek Helio P60 chipset နဲ့ နောကျမျောဒယျမှာတော့ Snapdragon 636 chipset ကို သုံးသှားမှာပါ။ ပရိုဆကျဆာပိုငျးသာမကဘဲ RAM နဲ့ သိုလှောငျမှုပိုငျး ကိုလညျး 4GB/64GB အတှဲနဲ့ 6GB/128GB အတှဲဆိုပွီး ဗားရှငျး နှဈမြိုး ပါရှိမယျလို့ သတငျးထှကျထားပါတယျ။ ဒီဖုနျးနဲ့ ပတျသတျပွီး စိတျဝငျစားစရာ feature တှကေိုတော့ လာမယျ့ မလေ ၁၆ ရကျနေ့ မှာ ထပျမံကွားသိရဦးမှာပါ။ လကျတလောထှကျရှိထားတဲ့ အခကျြအလကျတှကေိုအောကျမှာဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Previous articleCMIIT မှ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိသွားတဲ့ Samsung Galaxy Note 9
Next articleQualcomm Snapdragon 660 chipset အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Xiaomi Mi A1 ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖုန်းများ